सिन्धुपाल्चोकको ड्रोनबाट खिचिएको दृश्य, मानवीय विप, त्तिको योभन्दा बिजोग के हुन स क्ला र! (भि डियो हेर्नुहोस्) – Ap Nepal
सिन्धुपाल्चोकको ड्रोनबाट खिचिएको दृश्य, मानवीय विप, त्तिको योभन्दा बिजोग के हुन स क्ला र! (भि डियो हेर्नुहोस्)
कुनैबेला भुकम्प र बाढीपहिरोले थिलथिलो पारेको सिन्धु पाल्चोक यो वर्ष फेरि बा’ढीको नि’शानामा परेको छ।धेरै धनजनको क्ष’ति भएको सिन्धुपाल्चोक यो वर्ष फेरि मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण सिन्धुपाल्चोक बासी पि’डीत भएका छन्।
अहिले पनि मानिसहरू चिच्याउँदै भिडियोमा भनिरहेका छन् कि नदीको बहाब बढ्ने कारण लार्के खोला करिब तीन घण्टा जति थुनिएर बिष्पोट भइ नदीमा मिसिन आएको र बहाब बढाइरहेको छ।
इन्द्रावती र मेलम्चीमा आएको बाढिको कारण मेलेम्ची खानेपानी आयोजना र इन्द्रावती हाइड्रोमा ठूलो क्ष’ति भएको छ। हेलम्बुको मेलम्ची खानेपानीको सिरमा रहेको नाकुतेको पुललगायत तिम्बु पूल, फट्टे पूल, मेलम्ची पूल, बाहुनेपाटी पूल, ढाँडखोला पूल सम्पूर्ण बगाएको छ।
बाढीका कारण तिम्बु बजार, चनौटे बजार, तालामाराङ बजार, मेलम्ची बजार, क्ष’तबि’क्षत बनाएको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीयका अनुसार यी सबै बजारहरु बगरमा परिणत भएका छन्।
सिन्धुपाल्चोक का प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले मेलेम्चीमा भएको क्षतिको विवरण आउन अझै समय लाग्ने बताएका छन्। डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले सामान्य पानीको बाहर राति घटेको र पुनः विहानबाट बढेको सूचना पाएको बताए।
उनले भने, ‘क्षतिको विवरण त अलि समय लाग्छ होला। हामी जाँदैछौं। नेपाली सेनासहितको टोलीमा म आफै पनि जान्छु। मेलेम्चीसँगको सम्पर्क स्थलमार्गबाट टुटेको छ। हामी पुग्न ढिला हुन्छ होला। पुगेपछि नै धेरै कुरा थाहा हुन्छ।’उनले हातहातीकाे संख्या यकिन भन्न नसकिने भन्दै अहिलेसम्म बाहिर आएकै कुरालाई मात्र आधार मानिएको बताए।
यस्तै धेरै पुलहरु पनि बगाएको भन्ने कुरा आए पनि पुल माथिबाट नदी बगेकोले पुनः पानीको बहाब घटेपछि केही पुलहरु देखिएको पनि उनको भनाइ छ।उनले भने, ‘मैले राति पाएको सूचना अनुसार केही पुलहरु बाढीको ओभर फ्लो भएका कारण अदृष्य भएका थिए।
आज ती पुलहरु देखिएको भन्ने सूचना छ। घरहरु बगेको, मेलेम्चीको बाँध भत्तकाएको, पुलहरु बगाएको मानवीय क्ष’ति के कति भएको छ सबै सूचना आधिकारिक यकिन नभएसम्म भन्न गाह्रो हुन्छ। दिउसो नै यसको रिपोर्ट आउँछ।
Prevसामाजिक अभियन्ताहरु ज्वाला संग्रौला,हिमाल उपाध्याय र शर्मिला वाईबा पक्राउ
Nextआजको राशिफलः बि.स.२०७८ साल असार ७ गते सोमबार इश्वी सन २०२१ जुन २१ तारीख
तिब्र गतिमा फैलिदै नेपालमा कोरोना सं क्रमण – आज मात्र थपिय यति धेरै संक्र मित, के लक डाउन होला त अब ?
गायिका बिष्णु माझीको गीतमा, बले र रुबिनाको बबाल रो,मान्स गीतको भिडियो सार्वजनिक
आस्मा र सरोजको अभिनयमा ‘घिन्ता:ङ घिन्ताङ मादलु…’ भन्दै आए योगेश र सारिका (भि,डियो सहित)
सबिता माताले गरिन २०७७ सालको नेपालको डर,लाग्दो भबिस्यवा, णी – रबि,राजा देश र नेकपा एकता बारे यस्तो हे,र्नुस (भिडियो सहित)